New Thanksgiving Stuffing Recipes Spiced Up Kubva kuWhite Castle
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Thanksgiving Stuffing Recipes Spiced Up Kubva kuWhite Castle
White Castle iri kunongedza Thanksgiving gore rino nemabikirwo maviri matsva ekubika, neimwe yakavhurwa chete paCheteFans. Iyo Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing uye Kumaodzanyemba kwaMadokero kweJalapeño Cheese Slider Stuffing, misiyano ichangoburwa kune White Castle yekutanga stuffing resipi, zvirokwazvo ichawedzera kumwe kupisa kune chero tafura yemanheru. Iyi Thanksgiving inocherekedza makore makumi matatu ekutanga kuburitswa kweresipi muna 30.
Sezvinoreva mazita avo, ese ari maviri mavhezheni ekushongedza anoshandisa White Castle's inonhuhwirira Jalapeño Cheese Slider sechinhu chikuru chinoshandiswa.
"Nguva yezororo yave kuda kutonyanya kupisa nekuti mabikirwo aya anopisa chaizvo," akadaro Jamie Richardson, mutevedzeri wemutungamiri kuWhite Castle. "Jalapeño Cheese Slider yedu chinhu chakakurumbira mumaresitorendi edu uye mumagirosari egirosari, saka tinoziva kuti Cravers vedu vachada aya mabikirwo anopisa uye anonhuwirira."
White Castle yakabatana neFlorida-based firefighter uye chef kubatsira kuburitsa izwi pamusoro pemabikirwo matsva ekubika. Manny Washington Jr., mukuru wedunhu reOrlando Fire Dhipatimendi uye ane mukurumbira social media hunhu, acharatidza vateveri maitiro ekugadzira Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing, iyo inosanganisira zvidimbu zvecrispy bacon, diced jalapeno pepper, celery, cilantro, kumini uye shredded. pepper jack cheese, zvese zvichiuya pamwe chete kugadzira imwe-ye-a-kind inopisa-uye-inonhuhwirira flavour. Zvemukati zvake zvichaonekwa paWhite Castle's YouTube chiteshi uye ayo Facebook, Twitter uye Instagram account.
Uye ichiratidza divi rayo rinonhuwirira, White Castle iri kuunza inopisa uye inonaka kuMaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweJalapeño Cheese Slider Stuffing chete paCheteFans, iyo inonyoreswa-yakavakirwa pasocial media platform ine vanopfuura mamirioni zana nemakumi masere nevashandisi vakanyoresa uye vanopfuura mamirioni maviri vagadziri pasi rese. Iyi vhezheni inotora kupisa kune inotevera nhanho nekuwedzera yakawedzera jalapeño uye poblano mhiripiri uchiri kuratidza echinyakare stuffing flavour yaunoziva uye rudo. Vateveri veWhite Castle vanogona kuona iyo yakasarudzika resipi pane iyo brand's OnlyFans profiles.
"Chinhu chikuru nezveBacon uye Southwest shanduro yeJalapeño Cheese Slider Stuffing ndechekuti unogona kugadzira imwe inopisa uye inonhuwira sezvaunoda," akadaro Richardson. "Izvi ndizvo zvinofanirwa-kuve nendiro dzekudivi dzemhemberero dzeKutenda uye Kushamwaridzana."
Semubatsiri kune aya anopisa, matsva ekubika, White Castle iri kubata kutengeswa kwemoto payakaganhurirwa yayo zana rekuzvarwa edition "Cravey Boat." Inowanikwa paWhite Castle's House of Crave online gift store, Cravey Boat yakanakira giravy, fondue, hollandaise nemamwe masosi anoshuvira. Inowanikwa ne $100 chete.
Uye zvakare, White Castle iri kupa yemahara Castle Combo # 1-6 kana yemahara Yekudya Kwekudya Combo kune vese vanodzima moto vanoshanda paKutenda. Hapana coupon kana kutenga inodiwa, kunyangwe vanodzima moto vachikumbirwa kuratidza chitupa uye kusvika masikati asati asvika sezvo maresitorendi mazhinji ari kuvharwa nekukurumidza kwezororo.
Mabikirwo ekubika ari nyore asi anonaka anosvika kusvitsa makore makumi matatu eRecipe Slider® Stuffing resipi. Recipe iyi yakatanga muna 30, apo nhengo yechikwata cheWhite Castle yakasimudzira resipi yekuisa mhuri yaambuya nesaga reSliders. Kubva ipapo, iyo yakakurumbira Slider-based stuffing yave isiri tsika yekutenda chete, asiwo inogamuchirwa yekuwedzera kudya kwegore rose kuCraver mhuri mhiri kweUS.
Muna 2019, iyo mhuri yaive nekambani yekukurumidza-chikafu uye yevatengi yakarongedza zvinhu yakaunza yakagadziridzwa vhezheni yayo Yekutanga Slider Stuffing resipi yekukwezva vegans nevanodya zvirimwa. Ichishandisa iyo Impossible™ Slider sechinhu chikuru chinongedzo, iyo White Castle Impossible™Slider Stuffing yakapa vasingadyi nyama mukana wekunakidzwa nekuravira kwanga kusinganzwisisike nemunhu wese.
White Castle Cravers inogona kutenga maOriginal Sliders uye Jalapeño Cheese Slider muchikamu chefiriza pazvitoro zvegirosari munyika yose. Yekutanga Slider, Jalapeño Cheese Sliders uye Impossible™ Slider inogona kutengwa mumaresitorendi eWhite Castle. Mabiko ekuputira anopiwa pasi apa. Kuti uwane mamwe akasarudzika mazano ekubika uchishandisa White Castle menyu zvinhu, shanya www.whitecastle.com/food/recipes.
White Castle iri kukura zvakasiyana-siyana zvekupfekedza mabikirwo inokwezva kune dzakasiyana siyana dzeCraver zvinonaka. Matatu ekuputira mabikirwo akanyorwa pazasi. Yechina - uye inopisa - resipi yave kuwanikwa paWhite Castle's OnlyFansprofile.
Nguva yekugadzirira: maminetsi gumi nemashanu
Kubika nguva: 45 kusvika 50 maminitsi
Sevhisi: 4 kusvika ku6
3. 1 mukombe celery, diced
4. 1 mhiripiri yejalapeno, yakachekwa zvakanaka
5. 10 zvimedu bhekoni, yakabikwa uye yakachekwa (inenge 1¼ makapu)
6. 1 teaspoon munyu
7. ½ teaspoon mhiripiri
8. 1½ zvipunu kumini
9. ¼ mukombe cilantro, yakagurwa
10. ¾ mukombe turkey kana huku muto
11. 2 mazai
12. 1 kapu shredded pepper Jack cheese
1. Sungunusa bhotela muhombe skillet pamusoro pekupisa kwepakati. Wedzera diced celery uye jalapeno mhiripiri uye gadzira kusvika zvinyoro.
2. Heat Sliders maererano nemirairo yepakiti. Cheka muzvikamu.
3. Muhombe yekuvhenganisa ndiro kana pani, sanganisai maSlider akachekwa nebhakoni yakachekwa, munyu, mhiripiri uye kumini. Sakanidza mu cilantro nemiriwo kubva pa skillet. Kana uchibika zvinhu muTurkey, wedzera pepper jack cheese pano, zvakare.
4. Muchidimbu chiduku, sanganisa muto nemazai. Dururira pamusoro pekuisa musanganiswa uye fambisa kusvikira wagoverwa zvakafanana.
5. Isa musanganiswa wekuputira mu 9 × 13 kubika ndiro uye kumusoro ne pepper jack cheese.
6. Bika pa 350 degrees kwemaminitsi makumi matatu akavharwa. Wofukunura uye ramba uchibika kusvika kumusoro kwatsvukira, anenge maminitsi gumi nemashanu kusvika makumi maviri.
Nguva yekugadzirira: 5 kusvika ku10 maminitsi
Nguva yekuputira: 35 maminitsi
Kushumira: anenge 9 makapu ekuputira (akakwana 10 kusvika ku12-pound turkey)
1. 10 kusvika 12 White Castle Original Sliders, hapana pickles (kubva kuCastle restaurant kana mutengesi wepano)
2. 1½ makapu akachekwa celery
3. 1¼ zvipunu zvakakuyiwa thyme
4. 1½ maspuni epasi sage
5. ¾ teaspoon yakakangwa mhiripiri nhema
6. ¼ mukombe wehuku muto (kana 1 kapu yecasserole version)
1. Bvarura maSlider kuita zvidimbu zvinoruma uye uise mundiro huru yekuvhenganisa.
2. Wedzera diced celery uye seasonings.
3. Isa ¼ kapu yemuto wehuku wokanda zvakanaka.
4. Isa stuffing mumhango yeTurkey uye gadzira sezvaunowanzoita.
5. Kana uchibika uchiisa segaba, wedzera imwe ¾ kapu yemuto wehuku wokanda zvakanaka.
6. Fura kana mafuta 2-quart casserole dish.
7. Tumira stuffing kune casserole dish uye gadzira pa 350 degrees kwemaminitsi makumi matatu nemashanu.
Kushumira: anenge 9 makapu ekuputira
1. 10 White Castle® Impossible™ Sliders, hapana pickles
6. 1 kapu yemuriwo muto
1. Bvura Impossible™ Slider kuita zvidimbu zvinoruma woisa mundiro hombe yekuvhenganisa.
3. Wedzera 1 kapu yemuriwo muto uye fambisa zvakanaka; rega zvinhu zvigare kwemaminitsi gumi kuti zvitore.
4. Fura kana mafuta 2-quart casserole dish.
5. Tumira stuffing kune casserole dish uye gadzira pa 350 degrees kwemaminitsi makumi matatu nemashanu.